Dalxiis Warshad - Hebei Delin Makiinado Co., Ltd.
Tayada badeecadeenu waxay ka fiican tahay shirkadaha kale ee isla warshadaha ah. Tijaabinta laga bilaabo shubista ay sameeyeen hawl wadeenadeena khibrada iyo xirfada leh iyo kormeerayaashu waxay hubisaa tayada ugu sareysa ee qayb kasta ilaa mashiinka oo dhan.
Qalabka wax soo saarka:
Waxaan haynaa qalab wax soo saar oo taxane ah oo ay ka mid yihiin planomiller, lathe toosan, mashiinka qodista, Mashiinka la dhaqaajin karo, mashiinka diyaarinta carrada, foornada dhalaalida, foornada daaweynta kuleylka, iwm.
Warshadda wax taaj oo kale
Aqoon isweydaarsiga Golaha
qalabka tijaabinta ee qalabka: qaab dhismeedka biraha, sawirka qalabka dayactirka, makiinadaha, isku soo ururinta, iyo waxqabadka wax soo saarka waxaa lagu sameyn karaa qalabka baaritaanka ee falanqaynta qalabka iyo tijaabinta, sida tijaabada shoogga ee adkeysiga, tijaabiyaha xoogga guud, tijaabiyaha xoogga diirka, iyo qalabka cabbiraadda. iyo qalabka kormeerka ee isticmaalka gaarka ah iyo adeegsiga guud. Taas ka sokow, waxaan u dhisnay madal tijaabo xirfadeed loogu talagalay baaritaanka alaabooyinka sida bambooyin.
Tijaabinta waxqabadka alaabada
Delin waxay leedahay saldhigga ugu weyn ee baaritaanka biyaha ee qulqulka qulqulka ee Waqooyiga Shiinaha. Waxqabadka badeecada ayaa la tijaabin doonaa kahor dhalmada, si loo hubiyo kalsoonida iyo tayada alaabteenna.